राष्ट्र बैंकले आज १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोल गर्ने,काे-काे सहभागी हुँन पाउँछन् बोलकबोलमा ? - Sankalpa Khabar
राष्ट्र बैंकले आज १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोल गर्ने,काे-काे सहभागी हुँन पाउँछन् बोलकबोलमा ?
काठमाडौँ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मङ्गलबार रु १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्रको बोलकबोल गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बोलकबोल प्रक्रियामार्फत ‘विकास ऋणपत्र २०८५ ङ’ विक्री गरिने भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले आज मङ्गलबार अपराह्न ३ बजे उक्त ऋणपत्र बोलकबोल हुने जनाएको छ । ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी २०८५ फागुन १९ गते हुनेछ भने व्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुने र आर्जित व्याजमा व्याजकर लाग्नेछ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागे, काँग्रेसले…
३ बैशाख १६:५५